HIV ရှိတဲ့သူရဲ့သုက်ပိုးက မိန်းမကိုယ်ထဲ ရောက်မှ ကူးစက်တတ်သလား . . . – Healthy Life Journal
HIV ရှိတဲ့သူရဲ့သုက်ပိုးက မိန်းမကိုယ်ထဲ ရောက်မှ ကူးစက်တတ်သလား . . .
Posted on စကျတငျဘာ 13, 2018
မေး ။ HIV ရှိတဲ့သူရဲ့ သုက်ပိုးဟာ မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါထဲ ရောက်မှ ကူးစက်တတ်တာလား။ အဖော်မသုံးဘဲ ဆန္ဒ ပြီးမြောက်မူမဖြစ်သေးခင် သဘာဝအတိုင်းလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ယောက်ျားရဲ့ သုက်ရည်ကို အပြင်မှာပြီး ရင်ကော မိန်းမမှာ ကူးစက်ခြင်းကင်းပါရဲ့လား။
Ya Ta (Fb)
ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ သုက်ပိုးကြောင့် HIV ကူးစက်တာမဟုတ်ပါ။ ထွက်တဲ့ အရည်မှာပါတဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ ဗိုင်း ရပ်စ်ပိုးကြောင့် ကူးစက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတွင်းမှာ ထိတွေ့မိရုံနဲ့တင် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Related Items:HIV, Sperm